अमेरिकी एस्किमो डग ब्रीड जानकारी र तस्वीरहरू - कुकुरहरु
अमेरिकी एस्किमो डग ब्रीड जानकारी र तस्वीरहरू
क्लोइ पूर्ण-बढेको अमेरिकी एस्किमो
अमेरिकी एस्किमो मिक्स ब्रीड कुकुरहरूको सूची
अमेरिकी एस्किमो स्पिट्ज
लघु एस्किमो डग
मानक एस्किमो डग
खेलौना एस्किमो डग
तपाईंको ब्राउजरले अडियो ट्याग समर्थन गर्दैन।
अमेरिकी एस्किमो एक सुन्दर, सानोदेखि मध्यम आकारको नॉर्डिक-प्रकारको कुकुर हो जुन सानो सामोइडे जस्तो देखिन्छ। त्यहाँ तीन प्रकारका छन्: खेलौना, लघु र मानक। यसको मतलब त्यहाँ सबै चासो र घर आकारका लागि एस्की छ। अमेरिकी एस्किमोको पा wed्ग आकारको टाउको छ उही लामा र खोपडीको साथ समान लम्बाई। यो ठाडो, त्रिकोणीय आकारको कान छ, र एक भारी plume पूंछ पछाडि कर्ल। यसको घाँटी राम्रोसँग बोक्दछ र शीर्ष रेखा राम्रो र स्तर। राम्रो खुट्टा र खुट्टाले एस्कीलाई बोल्ड, दमदार कार्यको साथ ट्रोट गर्न अनुमति दिन्छ। कम्प्युट कोट जहिले पनि सेतो, वा सेतो बिस्कुट वा क्रीम मार्कहरू सहित। यसको छाला गुलाबी वा खैरो छ। कालो यसको पलक, गम, नाक र प्याड को मनपर्दो रंग हो। कोट घाँटी वरिपरि भारी छ, रफ वा माने सिर्जना गर्दछ, विशेष गरी पुरुषहरूमा। यो जात लामो भन्दा अग्लो छ। अमेरिकन एस्किमोको कोट कर्ल वा तरंग हुदैन तर अण्डरकोट बाक्लो र यसबाट क्रुद्ध बाहिरी कोटको साथ प्लश हुनु पर्छ। माथि वर्णन गरिएकाहरू बाहेक कुनै र colorsलाई अनुमति छैन। आँखा निलो हुनुहुन्न र कुनै एस्की देखाउन सकिदैन यदि यो inches इन्च (२ cm सेमी) भन्दा कम वा १ inches इन्च (cm 48 सेमी) भन्दा कम छ भने।
अमेरिकी एस्किमो एक मायालु, मायालु कुकुर हो। कठोर र चंचल, तिनीहरू बच्चाहरूसँग उत्कृष्ट छन्। आकर्षक र सतर्कता कुकुरको उच्च बुद्धिको कारण र यसले खुशी पार्ने इच्छुकताका कारण, यो तालिम दिन सजिलो छ र प्रायः आज्ञाकारिताको परीक्षणहरूमा शीर्ष स्कोररहरूको माझमा पर्छ। अमेरिकी एस्किमो काम गर्न मन पराउँछन्। तिनीहरू स्वाभाविक रूपमा अपरिचितहरूदेखि होशियार हुन्छन्, तर परिचय गराए पछि उनीहरू तत्काल साथी बन्छन्। एस्किमो एको साथ परिवारको अंश हुनु आवश्यक छ दृढ, स्थिर, आत्मविश्वास प्याक नेता । यदि तपाईंले कुकुरलाई विश्वास गर्न दिनुभयो कि उहाँ उही हुनुहुन्छ तपाईंको घरको शासक , धेरै फरक डिग्री व्यवहार समस्याहरु देखा पर्नेछ, समावेश सहित तर सीमित छैन, अलग चिन्ता , जुनूनी भौंकने, कुकुर आक्रामकता, ईच्छा र रक्षा गर्दै । पर्याप्त बिना मानसिक र शारीरिक व्यायाम , तिनीहरू hypeक्रियात्मक र उच्च कडा हुन सक्छ, सर्कलमा स्पिनि।। साना कुकुरहरुमा मानिसहरुमा प्याक नेता बन्न उच्च प्रवृत्ति हुन्छ, किनकि तिनीहरू साना र प्यारा हुन्छन्, र प्राय जसो मानिसहरु के भयो भन्ने बारे बेवास्ता गर्छन्। पढ्नुहोस् सानो कुकुरको सिन्ड्रोम थप पत्ता लगाउन।
खेलौना: - - १२ इन्च (२ - - cm० सेमी) - - १० पाउन्ड (२.4 - 4.5. kg केजी)
लघु: १२ सेकेन्ड (cm० सेमी) १ 12 इन्च (cm 38 सेमी) १० - २० पाउन्ड (4.5. - - kg किलो)
मानक: १ 15 इन्च (cm 38 सेमी) १ inches इन्च (cm 48 सेमी) १ 18 - p 35 पाउन्ड (k किलोग्राम - १k किलो)
हिप डिस्प्लेसिया र प्रगतिशील रेटिना atrophy को प्रवण। आँखा र आँसु नलीहरुमा ध्यान दिनुहोस्। केहीलाई पिसोको एलर्जी हुन्छ। यस नस्लले सजिलै तौल लिन सक्दछ यदि यसले पर्याप्त व्यायाम पाउँदैन र / वा ओभरफिड पायो भने।
अमेरिकी एस्किमोले अपार्टमेन्टमा ठीक गर्छ यदि यसलाई पर्याप्त अभ्यास गरिएको छ। यो घर भित्र धेरै सक्रिय छ र सानो यार्ड पर्याप्त छ।
अमेरिकी एस्किमो लाई लिन आवश्यक छ लामो दैनिक हिंडाई । यसले सुरक्षित रूपमा सुरक्षित गरिएको यार्डको आनन्द लिनेछ जहाँ यो नि: शुल्क चालू हुन सक्छ, यद्यपि यसलाई अझै प्याक पैदल यात्राको लागि लिन आवश्यक पर्दछ यसको माइग्रेसन वृत्ति पूरा गर्न।
करीव १ 15 वा अधिक वर्ष
औसत pu पल्पीहरू
बाक्लो, हिउँ सेतो कोट कोठा सजीलो छ। हप्तामा दुई पटक फर्म ब्रस्टल ब्रशको साथ ब्रश गर्नुहोस्। यो बृद्धि हुँदा दैनिक ब्रश गर्नु पर्छ। यो नस्ल एक औसत शेडर हो।
अमेरिकी एस्किमो नर्डिक जातका स्पिट्ज परिवारमध्ये एक हो। यो सेतो संग नजिकको सम्बन्धित छ जर्मन स्पिट्ज । जर्मन स्पिट्जेसलाई अन्ततः अमेरिकामा ल्याइयो जहाँ पहिलो विश्वयुद्धको दौडान जर्मन विरोधी भावनाहरूको कारण अमेरिकी एस्किमो डगको नाम परिवर्तन भयो। आज तिनीहरू छुट्टै जातको रूपमा चिनिन्छन् तर जर्मन स्पिट्जसँग नजिकको सम्बन्ध छ। को सामोएड , सेतो कीशन्ड सेतो पोमेरानियन र सेतो इटालियन स्पिट्ज पनि अमेरिकी Eskimo कुक सम्बन्धित छ भनिन्छ। प्रमाणले संकेत गर्दछ कि 'ब्वाइट स्पिट्झ' कुकुरहरूलाई जर्मन बसोबासद्वारा संयुक्त राज्य अमेरिकामा पहिलो पटक ल्याइएको थियो र नामको बाबजूद एस्किमो संस्कृतिसँग कुनै सरोकार छैन। नाम १ 13 १13 मा आए जब श्री र श्रीमती एफ.एम. हलले सर्वप्रथम यूकेसी (युनाइटेड केनेल क्लब) को साथ नस्ल दर्ता गर्‍यो। तिनीहरूको केनेलको नाम 'अमेरिकन एस्किमो' थियो जुन जातिको नाम भयो। १ 69। In मा नेशनल अमेरिकन एस्किमो डग एसोसिएशन गठन गरियो र स्टडबुकहरू बन्द भए। अमेरिकी एस्किमो डग क्लब अफ अमेरिका १ 198 55 मा AKC मान्यता प्राप्त गर्ने उद्देश्यले गठन गरिएको थियो। एकेसीले जुलाई १, १ 1995 1995 on मा अमेरिकी एस्किमो डगलाई मान्यता दियो। अमेरिकी एस्किमोलाई सुरुमा फार्मको बहुउद्देश्यीय काम गर्ने कुकुर भनेर चिनाइएको थियो। यो एक बौद्धिक कुकुर हो कि फुर्तिलो छ, कृपया खुशी पार्ने तीव्र इच्छा छ, एक सोच नस्ल हो र उत्कृष्ट हर्डिंग प्रवृत्ति छ। अमेरिकी एस्किमोको केही प्रतिभाहरू हर्डिंग, वाचडग, गार्डि,, ड्रग्स पत्ता लगाउने, फुर्तिलो, प्रतिस्पर्धी आज्ञाकारिता र प्रदर्शन गर्ने युक्तिहरू हुन्।
उत्तरी, AKC गैर खेल
ACA = अमेरिकी क्यानाइन एसोसिएशन इंक।
ACR = अमेरिकी क्यानाइन रेजिस्ट्री
AKC = अमेरिकी केनेल क्लब
APRI = अमेरिकाको पाल्तु रजिस्ट्री, Inc.
CKC = Continental केनेल क्लब
NAPR = उत्तर अमेरिकी प्यरेब्रेड रेजिस्ट्री, इंक
NKC = राष्ट्रीय केनेल क्लब
युकेसी = युनाइटेड केनेल क्लब
बडी अमेरिकी Es महिना पुरानो एस्किमो पिल्ला
अमेरिकी एस्किमो डगका अधिक उदाहरणहरू हेर्नुहोस्
अमेरिकी एस्किमो डग चित्रहरु १
अमेरिकी एस्किमो डग चित्रहरु २
अमेरिकी एस्किमो डग चित्रहरु।
जर्मन स्पिट्ज प्रकार
Pungsan कुकुर प्रजनन जानकारी र चित्रहरु
चिनियाँ पानी ड्रैगन घरपालुवा जनावरको रूपमा राख्दै
चिहुआहुआ कुकुर जातको जानकारी र तस्वीरहरू
एलानो Español कुकुर प्रजनन जानकारी र चित्रहरू
Chussel कुकुर प्रजनन जानकारी र चित्रहरू
जर्मन शेफर्ड कुकुर जातका चित्रहरू,।
लघु शर- Pei कुकुर प्रजनन जानकारी र चित्रहरू
मुडी कुकुर जातको जानकारी र चित्रहरु
चाउ चौ कुत्ता प्रजनन जानकारी र चित्रहरू
अमेरिकी एस्किमो कुकुर चिहुआहुआ मिक्स
शीर्ष दस कुकुरका नस्लहरू जुन काट्छन्
बेससेट हाउन्ड पहेलो प्रयोगशाला मिक्स
अकिता जर्मन गोठाला हस्की मिक्स
कुकुर पंजामा टिकको चित्र